မြ၀တီ - ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၉ ဦးထိရှိလာ ….
ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၉ ဦးထိရှိလာ ….
Tuesday, 20 August 2019 08:47 font size decrease font size increase font size
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A(H1N1)pdm 09 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှ သြဂုတ် ၁၉ ရက်အထိ သေဆုံးသူ ၉၉ ဦးထိ ရှိလာပြီး ပိုးတွေ့လူနာ ၅၅၂ ဦးထိရှိလာကြောင်း ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန ဗဟို ကူးစက် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ဌာနခွဲ၏ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု သေဆုံးစာရင်း များအရ သိရသည်။
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A(H1N1)pdm 09 ကြောင့် သြဂုတ် ၁၆ ရက်အထိ သေဆုံးလူနာ ၉၆ ဦးရှိခဲ့ရာ သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးမှ သေဆုံးသူ တစ်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ သေဆုံးသူ တစ်ဦး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးမှ သေဆုံးသူ တစ်ဦး ရှိ လာသောကြောင့် စုစုပေါင်း ၉၉ ဦးအထိ တိုးလာကြောင်း သိရသည်။
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ရာသီတုပ်ကွေး ရောဂါ A(H1N1)pdm 09 ကြောင့် သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၌ ပိုးတွေ့လူနာ ၂၅၇ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၆၆ ဦး ထိရှိနေကြောင်း၊
ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် သေဆုံးသူ ၃၃ ဦးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A(H1N1)pdm 09 သံသယဖြင့် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ ၁၃၂၇ ဦး ထိရှိလာကာ ပိုးတွေ့လူနာ ၅၅၂ ဦးရှိလာကာ ယခင်ထက် များပြား လာကြောင်း သိရသည်။
Read 90 times Last modified on Tuesday, 20 August 2019 08:48
More in this category: « Senior General Min Aung Hlaing visits multiple art-park, meets offifi cers, other ranks and their families of Military Attaché Offifice and trainees တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ »